Sheikh Axmed Al-Tayeb:- Hadalada Sheikh Caana Kasoo Yeedhay Ee Doodaha Kulul Dhaliyay | Gaaroodi News
Sheikh Axmed Al-Tayeb:- Hadalada Sheikh Caana Kasoo Yeedhay Ee Doodaha Kulul Dhaliyay
Qoral uu bartiisa twitter-ka soo dhigay Sheekh Axmed Al-Dhayib oo uu ku “baneeyay” arrimo dhowr oo la xiriira dumarka ayaa waxay dalka Masar ka abuurtay doodo kulul.
Dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxay u kala qaybsameen laba dhinac, qaar ayaa soo dhoweeyay hadalka Sheekha iyada oo ay kuwa kalana sheegeen in arrinka uu Sheekha sheegay ay Shareecada Islaamka ka hor imaanaysa.
Qoraalka Sheekha ayaa waxa lagu xusay in haweenayda Islaamka ah ay “muxram la’aan safri karto ama socdaali karto.”
Sheekha ayaa waxa la xasuusiyay inuu jiro hadiis dhahaya “Lama ogola in qof dumar ah hal maalin iyo hal habeen ay safarto muxram la’aan,” Balse Al-Dhayib ayaa bayaankiisa ku sheegay in xilliga casriga ee la jooga uu isbadelay hanaanka loo safro, isaga oo sheegay inay hadda ammaantahay in meel walbo loo safro balse wuxuu ka fogaaday inuu ka hadlo arrimaha la xiriira Xajka iyo Cumrada.
Hadalladaas ayaa waxa cambaareeyey ama dhaleeceeyay dadka isticmaala baraha bulshada, wadaaddo iyo aqoonyahanno. BBC Carabiga, ayaa la xiriirtay Axmed Mahran, oo ah garyaqaan aad uga soo horjeeday hadallada Sheekha oo ahaa , ” albaabada u fura gabdhaha, waa inay socdaali karaan iyaga oo aan fasax xitaa dalbanin” isaga oo hadaladaas ku tilmaamay kuwa niyad jab ah.
Garsoorka iyo shaqooyinka sar sare ee dowladda
Al-Dhayib ayaa sidoo kale ka hadlay xaq u lahaanshaha inay dumarka qaban karaan jagooyinka hoggaaminta.
“Lama ogola in la hareer maro xuquuqdan la wareegida ama dhigista caqabadaha ama dhibaatooyinka maamul ee ka yimaada kuwa ku kibraya in haweenku ag fadhiistaan.” Ayuu ku yiri qoraalkiisa.
Wuxuu sidoo kale yiri, ” isku day kasta oo lagu diidayo hoggaaminta dumarka waa dambi weyn”
Mahran ayaa wuxuu muujiyey sida uu uga walaacsanyahay bayaankan sidoo kale, isagoo tilmaamaya aragtidiisa in aan la oggolaan karin in markhaatiga dumarka keligood lagu qaato diinta. Intii lagu guda jiray wareysiga uu siiyay BBC, Mahran wuxuu sharraxay, “Xukunka haweenka waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay cadaadis maskaxeed ama mid jir ahaaneed xilliyada qaarkood oo aysan diin la xiriirin.”